Bubata onyonyo na ụdị 3D site na Google Earth - Geofumadas
Ihe nbudata na ihe ngosi 3D site na Google Earth
Mee, 2011 Google Earth / Maps, Microstation-Bentley, topografia
Microstation, site na nsụgharị 8.9 (XM) na-eweta usoro arụmọrụ iji nwee mmekọrịta na Google Earth. Na nke a, achọrọ m ịkọwa mbubata nke ụdị akụkụ atọ na onyinyo ya, ihe yiri nke ọ na-eme AutoCAD Civil 3D.
A na-arụ ọrụ ndị a site na:
ma ọ bụ na ọ bụrụ na Microstation bụ Spanish, nke na-eme ka ọ gbanwee:
Nke a bụ arụmọrụ nke ikpo okwu ọ bụla na-agba na Microstation, dị ka PowerCivil, Bentley Map, Bentley Coax, wdg. Ihe oyiyi nke isii na nke asaa na-eje ozi, otu iji mekọrịta echiche Google Earth dabere na nke anyị nwere na Microstation na nke ọzọ iji mee mgbanwe. Ihe ngosi nke anọ bu iweta onyonyo Google na eserese.
1. The faịlụ nkwụsị
Iji malite, ọrụ a na-achọ na faịlụ nchịkọta bụ 3D, ọ bụrụ na anyị nwere faịlụ nke e ji mkpụrụ 2D wuru, ihe a ga-eme bụ:
Faịlụ> mbupụ> 3D
Mgbe ahụ, anyị na-emeghe faịlụ na anyị exported. Ihe ozo gha aghaghi inwe bu usoro uzo ala. Nke a gbanwere ntakịrị mgbe Microstation 8.5 gasịrị, mana ọ na-amata usoro e kenyere na nsụgharị ndị ahụ ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ na-ekwu na ọ bụ usoro UTM mana ọ naghị akọwa mpaghara. Ọ bụrụ na ịnweghị, a na-eme ya site na iji akara ngosi mbụ nke ụlọ mmanya m gosipụtara na mbido post na ịhọrọ sistemụ na-amasị anyị n'ọbá akwụkwọ. Na nke a, anyị ga-ekenye usoro atumatu (ihe ọ bụla, nke ọwụwa anyanwụ ...) ma anyị họrọ nhọrọ World (UTM) site na WGS84 datum, ebe ọ bụ sistemu eji Google Earth.
Iji ghara ịlụ ọgụ nke ukwuu, ị nwere ike ịnye usoro ndị ọkacha mmasị na ya, nke a ekwesịghịkwa ịchọpụta oge ọ bụla anyị chọrọ ya.
N'ihe banyere Google Earth, ọ na-adaba adaba iji zoo compass, ọkwa ọkwa, grid ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-enweghị mmasị na anyị. O kwere omume na nhọrọ nke ihe omuma ihe omuma nke sitere na Google Earth 5, gbanyụọ mkpuchi nke afọ ndị anyị na-enweghị mmasị na ya, ọtụtụ oge ndị na-adịbeghị anya anaghị ahụkarị. Ozugbo anyị dị njikere, anyị ga-ahọrọ ebe mmasị, ma mekọrịta n'etiti Google Earth na Microstation.
E nwere otu panel nke na-enye anyị ụfọdụ nhazi, mana na omume ha abaghị uru dị ka usoro ntụgharị ihu igwe nke Google Earth ji eme ihe dị mfe, yana ụfọdụ na ụfọdụ United States na Puerto Rico. Yabụ enweghị isi na ịhọrọ ọghọm dị elu; Ihe dị mkpa ebe a bụ ịkọwapụta ma a ga-eji ntupu atọ ma ọ bụ grid mee ihe; Nhọrọ "ele ebe obibi" ga-arụ ọrụ mgbe niile.
2. Mbupu mbubata
Mbubata oyiyi na ị dị họrọ nke anọ button na mmanya na pịa na ihuenyo. N'ihi ya, anyị ga-enweta weghaara reticle.
Iji hụ onyinyo ahụ, anyị na-eme: Ngwaọrụ> zụọ> Lee, na nke a anyị wuliri panel nke anyị kpebiri ụfọdụ nhazi nke ụdị nsụgharị, nhụzi akara na nchapụta nke onyinyo ahụ.
Iji hụ ihe nlereanya na isometric, anyị na-eme ya na ngwá ọrụ dị na Nlele ahụ, anyị na-edebekwa isometric nke ọma anyị na-atụgharị ya kpamkpam. Hụ na ọ ga-ekwe omume inye naanị mpaghara gbara ogige nsu ma ọ bụ mpaghara dabere na ihe. Ma ọ bụrụ na anyị họrọ nhọrọ stereo, anyị nwere ike ịhụ ọrụ na anya anya nlekere anya stereoscopic -nke ndị anyị chefuru ịlaghachi mgbe ị na-ahapụ cinema-. The panel na m na-egosi n'okpuru dị iche a bit dị ka ngwa, n'ihi na nke a ka m na-eji PowerCivil nke nwere nhọrọ ndị ọzọ.
Ihe oyiyi ahụ na-abata na mbara igwe na àgwà dị ntakịrị karịa nro dịka ọ bụ otu sreen; na-emeziwanye mgbe ị na-eji nsụgharị Google Pro na idobe Google Earth na ọnọdụ DirectX. N'ihe banyere ụdị dijitalụ, enweghị ike ịka mma karịa ihe Google na-enye, agbanyeghị nke a dị ka ụzọ dị mma maka arụkọ ọrụ Stitchmaps, nke ị nwere ike ibudata foto dị elu na ya na onye a nwere ike geo-referenced.
Ọ bụ ezie na a ga-egosipụta ya dị ka ọ bụ ihe ngosi dijitalụ ma ọ bụghị onyinyo, oge ọ bụla a gbanwere mgbanwe na nsụgharị, a na-emepụta onyinyo n'otu ndekọ ahụ, nke a ga - ejikọta ya na onye njikwa raster.
Kọwapụta obi abụọ abụọ: Enwetaghị ụlọ 3D, ebe ndị a abụghị akụkụ nke ụdị dijitalụ na nkenke nke ihe nlereanya ahụ nwere ike imeziwanye site na ịme obere njide. Were ihe atụ nke San Sebastián, ebe ogo nke ozi bụ okomoko; n'aka nri bụ otu ogbugba e weere na ọkwa dị iche iche nke mbugharị.
Ruo ugbu a, PlexEarth na-ewere ọrụ dịka ọrụ kachasị mma n'etiti Google Earth na usoro CAD.
Previous Post«Previous Google Earth; nkwado anya maka ndị na-ese foto
Next Post Azụmahịa AutoCAD 2013 dị mmaNext »
5 na-aza "Bubata onyonyo na ụdị 3D sitere na Google Earth"
Iji rịọ ụdị nyocha, kọntaktị Jesus.Zenteno@bentley.com onye bụ onye nnọchianya maka Central America na Mexico.
N'ebe ahụ na ebe nrụọrụ weebụ bụ ozi email.
efrain kwuru, sị:
Achọrọ m MGBE MGBE AHỤRỤ ebe m debara aha na ibudata
N'ezie, ọ bụghị n'efu.
Ọ bụrụ na ị debanye aha na ọrụ SELECT ọ ga-ekwe omume ịrịọ ụdị ikpe, ma ọ bụrụ na profaịlụ gị metụtara.
ebee ka m nwere ike ibudata ngwá ọrụ a iji googleEart